आँफु भन्दा ५ वर्ष कान्छा प्रेमीसँग १ वर्ष लिभिगं रिलेशनसिपमा बसेकी प्रिन्जु रुँदै पुगिन् प्रेमीको घर – Sandesh Press
आँफु भन्दा ५ वर्ष कान्छा प्रेमीसँग १ वर्ष लिभिगं रिलेशनसिपमा बसेकी प्रिन्जु रुँदै पुगिन् प्रेमीको घर
August 7, 2021 263
काठमाडौँ । पुर्वकी प्रिन्जुले आफुलाई पंकजले ३ पटक विवाह गरेको बताएका छन् । उनले पंकजसंग ३ पटक सिन्दुर पोते गरेको दावी गरेकी छन् । झापा बुधवारे निवासी प्रिन्जु भट्टराईलाई श्रीमती बनाएर विचल्ली पारेको भन्ने समाचार वाहिरिएको हो । प्रहरीवाट रिहा भएपछि पंकजले प्रिन्जुलाई पनि छोडेका छन् । उनलाई एक वर्ष सम्म श्रीमतीका रुपमा सबै अधिकार दिएर पंकजले सुनसरीमा राखेको बताएकी छन् ।
सुनसरीको धरानवाट उनीहरु चो’री घटनामा प’क्राउ परेका थिए । तर यता पंकजका परिवारले भने प्रिन्जुलाई बुहारी स्वीकार नगर्ने बताएका छन् । उनीहरुले प्रिन्जुको पहिले नै विवाह भइसकेको र ३ वटा सन्तान समेत रहेको पंकजका बुवाआमाको भनाइ छ । पंकजका बुवाआमाले कोठामा भएका सबै सामान लिएर गएको प्रिन्जुको भनाई छ । म परिवार छोड्न सक्छु तर तँलाई छोड्न सक्दिन भनेर पंकजले भनेको प्रिन्जुको भनाई छ ।
परिवारलाई प्रिन्जुसंग आफ्नो छोरा बस्छन् भन्ने थाहा भएको उनको भनाई छ । पंकजको बुवाले प्रिन्जु आफ्नो काकी नाता पर्ने समेत बताएका छन् । आफ्नो बहिनीको लागि भन्दै पंकजको हात माग्न गएकी प्रिन्जुलाई हामीले कसरी बुहारी मान्ने पंकजका बुवाआमाको भनाई छ
Prevबेला-बेला गर्भाशयमा जलन भएको महशुस हुन्छ ? सावधान ! हुनसक्छ यस्तो खतरा
जेलमा पललाई भेट्न किन जाँदैनन् आमा बुवा’ कारण एस्तो’ पल’ले जेल भित्र गरे एस्तो काम जानकारी भिडियोमा
काल बनेर आएको कोइलाले लियो एकै परिवारका पाँच जनाको ज्या’न